Hantidhawraha guud ee Qaranka oo ka qeyb galay shirka Caalamiga ee hay’adaha Hantidhawrka – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Hantidhawraha guud ee Qaranka oo ka qeyb galay shirka Caalamiga ee hay’adaha Hantidhawrka
By C/raxman maxamed Ibrahim / September 16, 2020 September 16, 2020
Muqdisho (SONNA)- Hantidhawraha Guud ee Qaranka, mudane. Maxamed Maxamuud Cali ayaa ka qayb galaya shir caalami ah oo socon doona muddo labo maalmood ah, taasi oo u dhaxaysa 16-17.September.2020. Shirka ayaa waxaa soo agaasimay Ururka Hay’adaha Hantidhawrka Caalamiga ee loo soo gaabiyo (INTOSAI).
Kulanka waxaa sidoo kale ka qayb galaya Ururrada Hantidhawrayaasha Caalamiga AFROSAI, AFROSAI-E oo ay ku midaysan yihiin Hay’adaha Hantidhawrka Afrika ee Ingiriisiga ku hadla iyo kuwa Carabta ee loo soo gaabiyo ARABOSAI oo uu Xafiiska Hantidhawrka Qaranku xubin buuxda ka wada yahay.
“Shirkan oo u dhacaya qaabka muuqaal-aragga maadaama uu wali jiro saamaynta cudurka safmareenka ah COVID-19 ee dunida oo idil saameeyay, ayaa inta uu socdo waxaa la isku dhaafsan doonaa xog iyo warbixinno la xiriira ‘sidii loo horumarin lahaa kaalinta Hantidhawrka ee kaga aaddan ilaalinta hantida dadwaynaha iyo hubantigalinta in loo maareeyo hantidaas si waafaqsan shuruucda u dagsan ee muhiimka u ah helitaanka ammaano iyo daah-furnaan kuwaas oo udub-dhexaad u ah hannaanka Dowlad wanaagga’’.ayuu yiri Hantidhawraha Guud ee Qaranka
Hantidhawraha Guud ee Qaranka ayaa sidoo kale la filayaa inuu khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyo madasha.
Halkan kala deg War-saxaafadeedka